रोल्पाको जेठो क्याम्पस बन्यो आंगिक | Educationpati.com
२०७५ चैत्र ११ गते ०७:१५मा प्रकाशित
रोल्पाको जेठो क्याम्पस जलजला वहुमुखी क्याम्पसलाई मध्यपश्चिमाञ्जल विश्व विद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रुपमा विधिवत हस्तान्तरण गरिएको छ । क्याम्पस परिसरमा आयोजत एक कार्यक्रमका सभामुख कृष्णवहादुर महराको प्रमुख आतिथ्यतामा क्याम्पसका संचालक समितिका अध्यक्ष प्रेमप्रकाश हमालले मध्यपश्चिमाञ्जल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. उपेन्द्र कुमार कोईरालालाई क्याम्पस हस्तान्तरण गरेका हुन ।
हस्तान्रण कार्यक्रममा वोल्दै सभामुख कृष्णबहादुर महराले क्याम्पस राज्यको दायित्वमा गयो भन्दैमा स्थानीय समुदाय क्याम्पसको गुणस्तर अभिवृद्धीका लागि पन्छिन नहुने बताए । क्याम्पस समुदाय संगै रहेको औंल्याउदै महराले समुदायको सहयोग बिना शैक्षिक संस्था चल्न नसक्ने बताए । शैक्षिक जागरणले मात्र सभ्य समाज निर्माण हुने वताउदै सामाजिक विकृती वेथितिको अन्त्य सभ्य समाजले मात्रै गर्न सक्ने कुरामा महराको जोड थियो ।
प्राविधिक शिक्षाले मात्रै जीवनउपयोगी सीप दिन सक्ने औल्याउदै सवै शिक्षण संस्थाहरुले प्राविधिक पठन पाठनमा जोड दिनु पर्ने सभामुख महराको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. उपेन्द्र कोइरालाले भिक्षा दिने नभएर दीक्षा दिने शिक्षा आवश्यक रहेको बताए । भिक्षा दिने शिक्षाले वेरोजगार मात्रै उत्पादन गर्ने औंल्याउदै दीक्षित मान्छे मात्रै आत्म निर्भर हुन सक्ने कोइरालाको भनाई थियो । मध्य पश्चिमाञ्जल विश्व विद्यालयले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएको वताउदै प्राविधिक शिक्षाले देश विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ डा कोईरालाले भने ।
२०६१ सालमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयको संवन्धनमा संचालित सो क्याम्पस विधिवत मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालयमा हस्तान्तरण भएको हो । मानविकी, व्यवस्थापन र शिक्षा शास्त्रमा स्नातक तह सम्म पठन पाठन हुने सो क्याम्पसका लागी भारतीय राजदुतावासको सहयोगमा २४ कोठे शैक्षिक भवन निर्माण गरिएको छ । सो क्याम्पसमा हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय तर्फ २१६ जना र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालय तर्फ १३८ गरि ३५४ जनाले पठन पाठन गर्दै आएका छन । १६ प्राध्यापक र ४ प्रशासनिक कर्मचरी गरि क्याम्पसमा २० जना शिक्षक कर्मचारी कार्यरत रहेको क्याम्पस प्रमुख विष्णु आचार्यले जानकारी दिए ।